နိုင်ငံတကာ MP3 Download
Video Converter Ultimate လေးပါ. အသုံးလိုမယ်ထင် ရင်ယူသွားလိုက်ပါ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် Effect လေးတွေလည်း တော်တော် လှပါတယ်.. ကဲ Video ဖိုင်လှလှ လေးတွေ လုပ်မယ် လုပ်ချင်တယ် ဖုန်းထဲ သိမ်းထား မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးက အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် 31 MB ပဲ ရှိသလို Crack ဖိုင်လေး
ဘိလိယက်ဂိမ်း လေးပါ .. ၀ါသနာပါသူများ အတွက် လိုချင်ရင် အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ.. အွန်လိုင်းမှာ ဆော့လို့ရပေမယ့် အင်တာနက်မရှိ လည်း မိမိကြိုက်တဲ့ အချိန်ဆော့ လို့ရအောင်ပါ.. ဂိမ်းဝါသ နာအိုး များအတွက် မရှိသေးဘူး ဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် ရှာပေးလိုက်ပါတယ်.. နက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ
Alien Shooter ဂိမ်းလေးပါ ( 20 MB )
Free Game သမားများအတွက် ထက်ပြီးတော့ ပေးလိုက်ပါအုံးမယ်. ဂြိုလ်သားတွေ ကိုကောင်းကောင်း ပစ်ခတ်ရမဲ့ ဂိမ်းလေးပါ.. တော်တော် ဆော့လို့ကောင်းပါတယ် အမုန်းပစ် အကြိုက်ပစ်ပဲ ဂိမ်းသေးပါပဲ ကွန်ပျုတာတိုင်း ဆော့ လို့ရမှာပါ RAM 64MB နဲ့ VGA 16MB ရှိယုံနဲ့ ဆော့လို့ ရပါပြီ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း
နှင်းခဲလေး တွေနဲ့ ပေါက်ပြီး ကစားတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ အနီရောင်လေးတွေက မိမိဘက်ကပါ . နေရာရွေ့ပြောင်း ကစားပါတယ် .. ကလေးဂိမ်း လေးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ် အပြင်းပြေတာ တော့ အမှန်ပဲ .. နိုင်ဖို့တော့ မလွယ်ဘူး မဆော့ ဘူးလို့ဆော့ချင်တယ် ဆို ယူသွားလိုက်ပါ.. 1 MB ပဲရှိတာပါ အပျင်းပြေလေးပေါ့ ချစ်စရာ ဂိမ်းလေးပါပဲ ..
Screen Recorder လေးပါ .. အသုံးလိုမယ်ထင် ရင်ယူသွားလိုက်ပါ . မိမိကွန်ပျူတာ Screen မှာ ရှိတာတွေ လုပ်နေတာ တွေ အကုန်လုံး Record လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် . ဥပမာ - ကို့ချစ်သူနဲ့ ချက်နေတာတွေ web cam ကြည့်နေတာတွေ ကို သတိရတဲ့ အခါ ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သီချင်းများ၊ ဇာတ်ကားများ ကိုလည်း
System Speed ကို မိုမြန်စေမည့် ဆော့ဝဲလေးပါ .. ဒါကတော့ အရင်တင်ပေး ထားတာ ထက်ပိုမိုကောင်း မွန်စွာ အလုပ်လုပ် နိုင်ပါတယ်. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာ ရှိသူတိုင်းအတွက် ရှိသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခု ပါပဲ ကွန်ပျူတာသုံးရတာ လေးနေရင် ဘယ်သူမှ ဘ၀င်ကျမယ်တော့ မထင်ဘူး ဒီကောင်လေးက System ရဲ့
Photoshop သမားများ အတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်.. ဖိုတိုရှော့အတွက် ရှာတင်ပေး လိုက်တာပါ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ.. Photo Lighting အတွက် ဖြစ်ပါတယ်..
Video Converter Ultimate လေးပါ. အသုံးလိုမယ်ထင် ရင်ယူသွားလိုက်ပါ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် Effect လေးတွေလည်း တော်တော် လှပါတယ်.. ကဲ Video ဖိုင်လှလှ လေးတွေ လုပ်မယ် လုပ်ချင်တယ် ဖုန်းထဲ သိမ်းထား မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးက အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် 31 MB ပဲ ရှိသလို Crack ဖိုင်လေး ပါတင် ပေးလိုက်ပါတယ် အမြဲ သုံးနိုင်အောင်ပါ.. မရှိသေးလို့ လို ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ.. အားလုံးအဆင်ကြပါစေ...
ဘိလိယက်ဂိမ်း လေးပါ .. ၀ါသနာပါသူများ အတွက် လိုချင်ရင် အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ.. အွန်လိုင်းမှာ ဆော့လို့ရပေမယ့် အင်တာနက်မရှိ လည်း မိမိကြိုက်တဲ့ အချိန်ဆော့ လို့ရအောင်ပါ.. ဂိမ်းဝါသ နာအိုး များအတွက် မရှိသေးဘူး ဆိုရင် အဆင်ပြေအောင် ရှာပေးလိုက်ပါတယ်.. နက်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ရှာလို့ရပါတယ်.. Free လေးပါပဲ .. မရှိသေးလို့ လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ.. 100 MB လောက် တော့ရှိပါတယ်.. အားလုံးအဆင်ပြေ ကြပါပါစေ..
Free Game သမားများအတွက် ထက်ပြီးတော့ ပေးလိုက်ပါအုံးမယ်. ဂြိုလ်သားတွေ ကိုကောင်းကောင်း ပစ်ခတ်ရမဲ့ ဂိမ်းလေးပါ.. တော်တော် ဆော့လို့ကောင်းပါတယ် အမုန်းပစ် အကြိုက်ပစ်ပဲ ဂိမ်းသေးပါပဲ ကွန်ပျုတာတိုင်း ဆော့လို့ရမှာပါ RAM 64MB နဲ့ VGA 16MB ရှိရုံနဲ့ ဆော့လို့ ရပါပြီ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 20 MB ကျော်လေးပဲရှိတာပါ.. ကဲ အပစ်အခတ် ၀ါသနာပါတယ်ဆို ရင်တော့ အောက်မှာ သာယူသွားလိုက် တော့ .. Free ပေမဲ့ Full Versions လေးပါ.. အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ..
Screen Recorder လေးပါ .. အသုံးလိုမယ်ထင် ရင်ယူသွားလိုက်ပါ . မိမိကွန်ပျူတာ Screen မှာ ရှိတာတွေ လုပ်နေတာ တွေ အကုန်လုံး Record လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် . ဥပမာ - ကို့ချစ်သူနဲ့ ချက်နေတာတွေ Web Cam ကြည့်နေတာတွေ ကို သတိရတဲ့ အခါ ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သီချင်းများ၊ ဇာတ်ကားများ ကိုလည်း Record လုပ်ထားချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ရပါတယ် တော်တော်များများ လည်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ.. ဘာကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး အသုံးလိုလို့ လိုချင်တယ်ဆို အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါ.. မရှိသေးလို့ လိုချင်တဲ့ သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်.. အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ..
Serial Key: 0poMixd+55mSsvkp+hh/zrunEr7Qz0x+EFMy1MBnfeO0xKfIDZmm5EfbkzIVr3aBR+qBZF/NQHNNWGXvoP43jQeqaCUkTqeLK/
System Speed ကို မိုမြန်စေမည့် ဆော့ဝဲလေးပါ .. ဒါကတော့ အရင်တင်ပေး ထားတာ ထက်ပိုမိုကောင်း မွန်စွာ အလုပ်လုပ် နိုင်ပါတယ်. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာ ရှိသူတိုင်းအတွက် ရှိသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးတစ်ခု ပါပဲ ကွန်ပျူတာသုံးရတာ လေးနေရင် ဘယ်သူမှ ဘ၀င်ကျမယ်တော့ မထင်ဘူး ဒီကောင်လေးက System ရဲ့ အမှား လေးတွေ အကောင်းဆုံး ပြုပြင်ပေးနိုင် ပြီး System ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ကို ပိုပြီးကောင်းလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ ထုံးစံအတိုင်း Free လေးတွေပဲ ရှာသုံးချင် တဲ့ သူတွေအတွက် အလွယ်တကူယူ သုံးနိုင်ပါတယ်.. အားလုံးအဆင်ပြေ ကြပါစေ..
- Next open the rar file by double clicking it. If you can't open it you need to get an archiver which supports rar files such as Winrar and extract. - All installation steps and essential info are included inside the file. Download Now
ဆိုင်ကယ် ဂိမ်းလေးပါ.. ကမ္ဘာကျော် ဆိုင်ကယ် သမားများနဲ့ ၀င်ရောက် ယှဉ် ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခု ပါ. တော်တော် များများ ဆော့ဘူးကြမှာ ပါ ဆော့ခါစဆို အခတ်အခဲ အများကြီး ရှိမှာပါ နောက်ဆိုရင် တော့ ကောင်းကောင်းနှစ် သတ်သွားကြမှာပါ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ Lan ချိတ်ပြီး ဆော့ နိုင် သလို တစ်ယောက်ထဲ လည်း ဆော့ လို့ ရပါတယ် .. တော်တော် များများစုံ ပါတယ် ပွဲ မပြိုင်ခင် လေ့ကျင့်နိုင်ပါသေးတယ် လမ်းတွေ များသလို ဆိုင်ကယ် တွေလည်း များပါတယ် အမှတ်ရတဲ့ ပေါ်မူတည် ပြီး LocK ဆိုင်ကယ်တွေ ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်.. Key တွေ ကလည်း ထွေထွေ ထူးထူး မဟုတ်ပါဘူး Arrow Key နဲ့ ပဲ မောင်းရတာပါ. ဘရိတ်တွေ ကတော့ Z နဲ့ X ဖြစ်ပါတယ် စုံနှိပ်ဆော့ပါ အရှိန် ကို ကောင်းကောင်း ထိမ်းနိုင်ပါတယ်.. ဆော့တက် သွားတာနဲ့ လုံးဝကြိုက် လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်.. ကိုယ်တိုင် Upload မတင်နိုင်လို့ ရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. မောင်းချင်တယ်ဆို ရင် တော့ အောက်မှာ ဒေါင်း လိုက်ပါ.. ဆော့မယ်ဆို ကွေ့တွေမှာ အရှိန်ကို လျော့ချလိုက်ပါ .. အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Frame Gif Maker လေးပါ
Photo လေးတွေကို Gif File ပြောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ.. မိမိပုံလေးတွေ အလွယ်တကူ Gif ဖိုင်ပြောင်း ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဆော့ဝဲလေးက အသုံးဝင်ပါတယ် အမှတ်အနေနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ လုပ်ပြီး သိမ်းထားမယ်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်.. ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေး လေးပါပဲ မရှိလို့ လိုချင်တယ်ဆို အောက်မှာ သာယူလိုက်ပါ.. အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ..
ကိုယ်ပိုင် ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်
Free သမားများ အတွက် ဓာတ်ပုံဆော့ဝဲလေး တစ်ခု ထက်ပေး ပါအုံးမယ်.. တော်တော် များများ တော့ရှိထားကြမှာ ပါ မရှိသေးတဲ့ သူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်.. ဖိုတိုရှော့ လုပ်တက်စရာမလိုပဲ ကို့ပုံ လေးတွေကို လှ သထက်လှသွား အောင်လုပ် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေး ကိုယူလိုက်ပါ.. ကျနော့ ဆီရှိတာ တော့ တော်တော် ကြာပါပြီ.. ဒါကတော့ အရင် ထက် Update လေးဖြစ်တာရယ် ပြန်လည် မျှဝေပေးချင်တာ နဲ့ ရှယ်လိုက်တာပါ.. လုပ်နည်းကလည်း မခတ်သလို Frame လေးတွေလည်း လှပါတယ်..
ကြာပါတယ်နော် မရှိသေးဘူုးဆိုရင် တော့ အောက်မှာသာ ဒေါင်းလိုက်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေ ကြပါစေ..
ကျနော် သိထားသော တိုတိုထွာထွာလေးများ နဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှ သတင်းနှင့် နည်းပညာများ သာဖြစ်ပါသည်.. ရောက်လာသူအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း.. ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ..
အမေ နဲ့ ရွာကိုလွမ်းမိတယ်
“တစ်ရောင်တည်းမခြယ် အရောင်ဝဲလည် တောနှင့်တောင်စွယ် လယ်ယာတလင်း ရှုခင်းတွေက စုံလင်ပေတယ် ...
ကွန်ပျူတာပြသနာ အမေး အဖြေများ
Copyright © 2011 တောသားလေး | Powered by Blogger